Degso Angry Birds loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (74.30 MB)
Degso Angry Birds,
Waxaa daabacay soo -saaraha ciyaarta madaxbannaan Rovio, Angry Birds waa ciyaar aad u xiiso badan oo fudud.
Noocyada mobilada ee ciyaarta ayaa madadaalo sare u siiya malaayiin isticmaale oo adduunka ah, iyo nooca kombiyuutarka ee ciyaarta ayaa noo oggolaaneysa inaan la kulanno madadaalo isku mid ah. Shimbiraha xanaaqsan, dhammaantood waxay ku bilowdaan doofaarro khiyaano leh oo xada ukunta shimbiraha xanaaqsan. Waqtigan xaadirka ah, waxaan galnaa ciyaarta oo waxaan ka caawinnaa shimbiraha xanaaqsan inay ka aargoostaan ​​doofaarrada wasakhda ah annagoo adeegsanayna awooddooda wax dumin. Laakiin sidaas ma sahlanaan doonto; maxaa yeelay doofaarradu waxay soo saareen habab difaac oo gaar ah oo ay isku difaacaan. Si looga gudbo difaacyadan, shimbirahayaga xanaaqsan waa inay ka gudbaan xujooyin kala duwan oo xariif ah oo ay gaaraan doofaarrada.
Shimbiraha xanaaqsan wuxuu siiyaa ciyaartoy saacado madadaalo ah. Ciyaarta dhexdeeda, waxaan ku tuurnaa shimbiraha xanaaqsan xagga doofaarka iyadoo leh dhalo ku jira xujooyin kala duwan oo ku saleysan fiisikis waxaanan isku daynaa inaan burburinno dhammaan doofaarrada qaybta ku jira annagoo ku ridnay alaab doofaarrada ama aan si toos ah u beegsanno doofaarrada. Waxaan u adeegsan karnaa noocyada kala duwan ee shimbiraha xanaaqsan ciyaarta. Halka qaar iyaga ka mid ah hore loogu tuuri karo hawada, kuwo kalena ay u qarxi karaan sida bambo oo kale oo ay ku abuuri karaan burbur weyn hareerahooda.
Shimbiraha xanaaqsan waa ciyaar ay tahay inay lahaadaan oo adeegsadayaasha da walba leh ay ku raaxaysan karaan ciyaarta.
Barnaamijyada La Xiriira: Degso Angry Birds 2
Angry Birds Noocyada
Cabirka Faylka: 74.30 MB